Ngaphambi kokwenza i-scrying kumele ushise amakhambi akho okukilina indawo osebenzela kuyona. Ake senze isibonelo: Nakhu uxakekile ufuna ukwazi ukuthi ukhethe yiphi indoda konawo, uzothatha indishi ufake amanzi ayi litre, uyibeke etafuleni bese ukhanyisa amakhandlela. Buka amanzi uwafunde, uzobona ishape yalendoda okumele uyikhethe, ukuze ubone i-shape uzodinga ukuyeka ukucabanga izinto zomhlaba ucabange inkinga obhekene nayo kuphela.
Ngaphambi kokusebenzisa umuthi kumele uzikiline kuqala. Ukuzikilina kususa i-negative energy (umoya omubi), emva kokusebenzisa umuthi kumele uzikiline futhi. Uyazikilina noma umuthi wakho ungasebenzanga. Uma usuqedile ukusebenzisa umuthi wakho kumele ulahle wonke amathuluzi okade uwasebenzisa, amathuluzi afana nemibese, amakhandlela nezi-tendi zawo, amabhokisi kametshisi njalo njalo.
Umuthi une-energy, leyo energy iyasala kuwena emva kokuwusebenzisa. Wonke lawo-ma energies angakudalela izinkinga ezifana namabhadi, isichitho njalo njalo. Umuthi owenza izinto ezinhle wona kasikho isidingo sokuzikilina uma uqeda ukuwenza. Uma usuqedile ukusebenzisa umuthi omuhle wuchithele esihlahleni noma isiphi isihlahla, ama-energies azosuka kuwe aye esihlahleni.
Indawo ozokwenzela kuyona umuthi kumele ihlanzeke ingabi nemimoya emibi. Umoya omubi uthikameza ukusebenza komuthi wakho. Umoya omubi ukhishwa ngelilodwa lamakhambi alandelayo: chamomile, thyme, bay leaves, ginger, basil, sage. Uyawashisa lamakhambi anuke, futhi lamakhambi uyawasebenzisa ukuvikela ikhaya lakho emimoyeni emibi.
Bongiwe Mondi 2020-09-06 07:04:02
Ndifa ukwazi umxovo oletha imali
Bongiwe Mondi 2020-09-06 07:07:16
Ndifuna ukwazi umxovo oletha imali
Mam Thusi 2020-10-27 11:44:00
I like business but feel tired and scared